Mogadishu Journal » Dowladda oo shaqo siineysa ilaa 1.000 dhalinyaro ah oo Soomaliyeed
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku amray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho inuu shaqaaleysiiyo illaa 1,000 dhalinyaro.
Hadalkan ayuu Ra’iisul Wasaaraha ka jeediyay Munaasabad xalay ka dhacday Muqdisho, kaasoo lagu maamuusayay Maalinta Dhalinyarada Adduunka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in si loo dhiso dalka loo baahan yahay in meel laga bilaabo, isgaoo shaaciyay in dhalinyarada shaqo abuur loo sameynayo.
“Waxaa rabaa inaan idinku bishaareeyo hadiyadii u horeysay oo ah warqad ka soo baxeysa xafiiskeyga oo lagu amrayo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir inuu shaqaaleysiiyo 1,000 dhalinyaro”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu ka codsanayo amarka shaqada lagu siinayo dhalinyarada uu u guto sida ugu haboon,
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in magaalada Muqdisho kaliya aanay aheyn goobaha dhalinyarada shaqada laga siinayo, isla markaana dowlad goboleed walba laga shaqaaleysiiyo dhalinyarada.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku sugan kumanaan dhalinyaro ah oo ka baxay Jaamacadaha, kuwaasoo shaqo la’aan heysato
Tiro ka badan 20 ruux oo ku dhimatay rabasho ka dhacay Kenya